Mgbanwe ihu igwe na-atụ egwu ikpochapụ ihe dị na mmiri anyị | Network Meteorology
Dịka anyị tụlere n'isiokwu ndị bu ụzọ, mgbanwe ihu igwe na-abawanye ugboro na ike nke oke ihu igwe dị ka ụkọ mmiri ozuzo. Ogologo oke mmiri ozuzo na-eyi egwu imebi mmiri anyị nwere na nke a na-etinye anyị n'ihe egwu.
Abụọ maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dị ka ọrụ ugbo na maka oriri na ịnye mmadụ, mmiri dị oke mkpa ma baa uru akụ. Otú ọ dị, mmetụta mgbanwe ihu igwe dị na bekee nke Spanish nwere ike ịkarị nke ndị a na-atụ anya na Hydrological Plans, dị ka otu nnyocha nke ndị nchọpụta si na Polytechnic University of Valencia (UPV) nke thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri na Gburugburu Ebe Obibi (IIAMA) mere.
1 Kedu ka mgbanwe ihu igwe si emetụta ihe mmiri?
2 Ihe omumu mmiri Spanish
Kedu ka mgbanwe ihu igwe si emetụta ihe mmiri?
Mgbe mmiri ozuzo na-ebelata mmiri ozuzo kwa afọ, mmiri na-ebelata mgbe ejiri ya ma rie ya. Na mgbakwunye, na nke a anyị ga-agbakwunye na mmụba nke okpomọkụ n'ime afọ na-abawanye ụba mmiri echekwara nke na-ekpochapụ ma gharazie aba uru. Achọpụtaghị akụkụ ndị a nke ọma n'ọtụtụ atụmatụ atụmatụ mmiri na Spain.
Nchoputa banyere ihe mgbanwe onodu ubochi banyere atumatu mmiri bu Patricia Marcos meputara ma ebiputara ya na akwukwo sayensi Ingeniería del Agua. Nnyocha a na-ekwusi ike na njedebe nke usoro a nyere na Spain iji nwee ike ijikọta mmetụta niile nke mgbanwe ihu igwe n'ime atụmatụ mmiri.
N'ime nnyocha ha mere na nkwubi okwu na-egosi na njikwa mmiri na Spain na-eleba anya nbelata ntinye mmiri site na mmiri ozuzo ma ọ nweghị ịtụle mgbanwe dị n'etiti mbara igwe. Nke ahụ bụ ịsị, Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe anaghị aghọta njedebe nke ụmụ mmadụ, ma na-emetụta ndọtị dum n'ogologo. Atụmatụ mmiri maka obodo kwụụrụ onwe ya nwere ike ịtụle akụkụ ụfọdụ yana atụmatụ ọzọ na-atụgharị uche na ndị ọzọ, mana, agbanyeghị, mgbanwe ihu igwe na-emetụta mmetụta ọ bụla otu.
Ihe omumu mmiri Spanish
Ọmụmụ ihe ahụ enyochale mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na mmiri mmiri nke usoro erigbu osimiri Júcar, na-echebara ọnọdụ mgbanwe ihu igwe kachasị ọhụrụ ma na-atụle nsonaazụ nke usoro mmiri mmiri atọ. Achọpụtakwara otu esi belata akụnụba mmiri na obere oge na ọkara yana otu a ga-esi belata ya. A na-atụ anya ka akụ mmiri dị ha ga-ebelata site na 12%, mana nchọpụta nyocha ahụ na-ebelata 20-21% na obere oge na 29-36% na etiti oge.
Mbelata nke mmiri a anaghị atụ anya na atụmatụ ụkọ mmiri ozuzo nke obodo ndị kwụụrụ onwe ha. N'ezie, achọpụtala na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya enweela mbelata yiri nke etinyere na Atụmatụ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, nyocha ahụ ekpebiela nnukwu ejighị n'aka banyere pasent enwere ike nke mbelata akụ, nke sitere na ụdị ihu igwe yana, na obere, ụdị mmiri.
Chọpụta pasent nke mbelata na mmiri mmiri abụghị naanị dabere na mmetụta mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ amụma ihu igwe, kamakwa na ihe ndị ọzọ, dị ka ọnọdụ okpomọkụ, ọchịchị ifufe, mmụba na ọchịchọ na ọnụ ọgụgụ mmadụ, mkpa oru ugbo, na ihe ndi ozo. Ọ bụ ya mere nnyocha ahụ ji atụ aro ịme atụmatụ na-adabere ọ bụghị naanị iji chọpụta mbelata na pasent nke mmiri mmiri, mana inwe ike nyochaa nkwụsi ike (ikike imeghari ma buru ibu) nke mmiri echekwara nwere n'ọnọdụ nrụgide. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta mpaghara ndị kachasị emetụta mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na ịkọwapụta usoro mmegharị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbanwe ihu igwe na-egwu mmiri anyị. Mmiri bụ ihe dị oke ọnụ ahịa ma dịkwa oke mkpa nke anyị ga-echekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe na-eyi egwu ikpochapu mmiri anyị